सौराहामा आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल – Gandaki Voice
बोलेरो गाडीमा आगजनी
तनहूँमा आफ्नै छोराद्धारा आमाको हत्या
नेपाल बन्द : पोखरामा आंशिक प्रभाव, सातसय सुरक्षाकर्मी खटाइयो
आज पोखराको मौसम सफा, देशभर कस्तो छ ?
सन्दिपले लिए दुई विकेट, टिम भने पराजित
उपराष्ट्रपतिसँग प्रचण्ड र बाबुरामले गरे गोप्य भेट
मेस्सीले अझै एक खेल गुमाउने (यस्तो छ कारण)
आज शनिबार : शनिदेवको प्रिय दिन, दुई पटक काल बेला, कस्तो होला राशिफल ?
प्रचण्ड-बाबुराम गोप्य भेटवार्ता, के होला अब ?
Home/देश/सौराहामा आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल
सौराहामा आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल
गण्डकी भ्वाइस Send an email December 17, 2020
सौराहामा पर्यटक : चितवनको सौराहा स्थित राप्ती किनारमा रमाउँदै गरेका पर्यटक । तस्बिर : नारायण ढुंगाना (रासस)
चितवन, २ पुस ।
कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण झण्डै वर्ष दिनदेखि थलिएको सौराहाको पर्यटन क्षेत्र विस्तारै माथि उठ्न थालेको छ । आन्तरिक पाहुनाका कारण सौराहाका पर्यटकीय गतिविधि यतिबेला चलायमान बन्न थालेका हुन् ।
होटल रेष्टुराँमा छुट र हात्ती सफारीमा घुम्न समय थप गरेर भए पनि व्यवसायीले पर्यटन क्षेत्र चलायमान बनाउने प्रयास गरेका छन । शुक्रबार र शनिबारको दिन सौराहामा आन्तरिक पर्यटकको राम्रै चहलपहल देखिन्छ ।
तिहारपछि आन्तरिक पर्यटकको आगमनले राहत र हौसला मिलेको व्यवसायी बताउँछन् । क्षेत्रीय होटल संघ सौराहाका अध्यक्ष दीपक भट्टराईले पछिल्लो समय सौराहालाई आन्तरिक पर्यटकले चलायमान गराउनथालेको बताए ।
‘पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकका कारण सौराहाले लय समात्न खोजेको छ, खर्च धान्ने अवस्था बन्न थालेको छ’, उनले भने । भट्टराईले आन्तरिक पर्यटक आकर्षित गर्न देशव्यापीरुपमा ‘घुमौं सौराहा’ अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
अंग्रेजी नयाँ वर्षअघि जनकपुर, वीरगञ्ज, विराटनगरलगायतका शहरमा जाने योजना रहेको उनले बताए । ‘देशका मुख्यमुख्य शहरमा अभियान सञ्चालन गर्छौँ’, उनले भने, ‘त्यहाँका उद्योगी, व्यवसायी र संघ संस्थाका प्रतिनिधिसँग भेटघाट गरेर सौराहा खुला छ र सुरक्षित छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्छौं ।’ उनले अंग्रेजी नयाँ वर्षको गन्तव्यस्थलको रूपमा सौराहालाई प्रवर्द्धन गर्न लागिएको बताए ।
सौराहामा आन्तरिक पर्यटकलाई आकर्षित गर्न हात्ती सफारीको अवधि थप गरिएको छ । कोरोनाका कारण भएको बन्दाबन्दीले थला परेको सौराहाको पर्यटनलाई उठाउन व्यवसायीले पर्यटकलाई थप समय घुमाउने निर्णय गरेका हुन् ।
युनाइटेड हात्ती सञ्चालन सहकारी संस्था लिका अध्यक्ष ऋषि तिवारीले पर्यटक आकर्षित गर्न सङ्घले विभिन्न प्याकेज दिएको बताए । एक घण्टाको प्याकेजमा हात्ती सफारी गर्नेका लागि डेढदेखि दुई घण्टासम्म घुमाउने गरेको उनले बताए ।
उनले भने, ‘चार जना भएपछि मात्रै सफारीमा लैजाने गरिन्थ्यो, तर अहिले दुई जना भए पनि जाने गरिएको छ ।’
उनले नाफाभन्दा पनि व्यवसाय धान्ने र पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने योजनाका साथ काम गरिरहेको बताए । होटलदेखि हात्ती चढ्ने स्थानसम्म समेत निःशुल्क गाडीको व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
पर्यटन दिवसको दिनदेखि लामो समयदेखि बन्द रहेका यहाँका होटल तथा रेष्टुराँ खुलेका थिए । यो समय सौराहाका होटलमा खचाखच पर्यटक हुन्थे । व्यवसायीलाई पर्यटकको स्वागतदेखि निकुञ्ज घुमाउन भ्याइनभ्याइ हुन्थ्यो । होटल तथा रेष्टुराँले प्याकेजअन्तर्गत २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म छुट दिएको बताएका छन् ।
होटल भन्दा रेष्टुराँमा पर्यटक केही धेरै छन् । रेष्टुराँ एण्ड बार एशोसिएशन नेपाल सौराहाका अध्यक्ष दीपेन्द्र खतिवडाले अन्तर जिल्लाका पर्यटकको आवागमन रहेको र करिब ३० प्रतिशत पर्यटक रेष्टुराँमा आउन थालेको बताए । उनले आन्तरिक पर्यटक बढ्न थालेपछि केही आशावादी बनेको बताए ।
उनले एशोसिएशनको तर्फबाट १५ प्रतिशतसम्म छुट दिइएको बताए । निकुञ्जले हात्ती, जिप र डुंगा सफारीबापत लिँदै आएको राजश्वमा छुट र नयाँ रुट खोलिदिनुपर्ने उनको माग छ ।
सौराहामा ठूला साना १४० होटल छन् भने करिब ५० रेष्टुराँ सञ्चालनमा रहेका छन् । सफारीका लागि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रख्यात छ । स्वदेशी र विदेशी पर्यटक यहाँ जंगल सफारीका लागि आउने गर्दछन् । दुर्लभ एकसिंगे गैँडा, बाघ, घडियाल गोहीजस्ता जनावर, चराचुरुंगीको अवलोकन गर्न पर्यटक आउने गर्दछन् । -रासस
बारपाकमा पनि पुग्यो केन्द्रीय प्रशारण लाइन
जन्मदिनमा के गर्ने, के नगर्ने ?
नेपालमा १४ गतेबाट कोभिड खोप लगाइने